Etu esi ewepu pịmpụl azụ | Bezzia
Etu esi ewepu pịmpụl na azụ
Susana Garcia | | Mma, Mma aghụghọ
El acne bụ nsogbu na anyị nwere ike inwe n'ọtụtụ ọnọdụ nke ndụ anyị, nke ahụ na-apụtakwa maka ebumnuche dị iche iche. O nwere ike inwe ihe kpatara ya, ma ọ pụkwara ịpụta n'ihi nrụgide, ịba ụba nke nje na ọbụna mmetọ. Kedu ụzọ ọ bụla, enwere ụzọ iji melite nsogbu a ma jiri nwayọọ nwayọọ wepụ etuto azụ.
N'ihu ihu igwe dị mma, anyị chọrọ gosipụ ọmarịcha azụ, na maka nke a anyị ga-enwerịrị akpụkpọ mara mma ma dịkwa mma. Yabụ, anyị ga-agbadata ịrụ ọrụ na mpaghara a, iji mee ka pịmpụl ndị ahụ kwụsị kpamkpam maka oge ọkọchị. Ma enwere ọtụtụ ihe anyị nwere ike ime, gụnyere iji ihe ndị sitere n'okike anyị nwere n'ụlọ.
1 Chọọ ihe na-akpata ya
2 Nlekọta kwa ụbọchị
3 Kpochapu ebe
4 Nchịkọta nri iji kpochapụ akpịrị
Chọọ ihe na-akpata ya
Otu n'ime ụzọ iji kwụsị etuto na-abụkarị chọọ ihe kpatara ya ma lụsoo ha ọgụ. Anyị na-ekwu maka ihe atụ ma ọ bụrụ na nsogbu ahụ bụ hormonal, ebe ọ bụ na ị nwere ike ịme nyocha ụfọdụ iji hụ ma homonụ gị kwesịrị ịdị. Ọzọkwa ọ bụrụ nsogbu nke nri adịghị mma, ebe ọ bụ na ọ na-emetụta ma a bịa n'inwekwu adịghị ọcha. N'okwu a, anyị ga-edozi nri, na-ezere abụba juputara na oke shuga. Ihe oriri na-edozi ahụ ma na-adị mfe ga-enyere anyị aka, na mgbakwunye na ị drinkingụbiga mmanya ókè ka akpụkpọ ahụ wee dịrị mma ma nwee adịghị ọcha.
Nlekọta kwa ụbọchị
Ọ bụrụ na anyị na-ahụ na e nwere a propensity maka adịghị ọcha na-apụta Na mpaghara azụ, anyị kwesịrị ịkpachara anya na ọrụ anyị na-arụ kwa ụbọchị, n'ihi na ọ nwere ike imerụ anyị ahụ. Anyị ekwesịghị ịkọcha ma ọ bụ wepu ihe nhicha ndị a ma ọ bụ adịghị ọcha site na aka a na-asaghị, ebe ọ bụ na nje bacteria na-agbakọta na ntu nwere ike ime ka nsogbu ahụ ka njọ. Havekwesịrị ịsacha ebe ahụ na-ezere ogbo, nke nje bacteria na-aba ụba. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na anyị ejiri owu etinye na lemon anyị ga-enyere ọka ndị a aka ihicha, ebe ọ bụ astringent. Mgbe ihu igwe dị mma, ọ ka mma ịhapụ azụ gị n'udo, na-eji nchedo anyanwụ, n'ihi na nke a na-eme ka ọka na-eme ka ọ dị mma ma mee ka ọdịdị ha dịkwuo mma, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-asa mmiri na mmiri.
Otu ụzọ ị ga-esi jiri nwayọọ nwayọọ wepụ ihe adịghị ọcha ndị mejupụtara azụ bụ na-ewepu mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ. Ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n'izu, anyị ga-ekpochapụ mpaghara ahụ, ọ bụ ezie na anyị ga-eji nwayọ mee ya iji zere iwe. Na azụ anyị nwere ike iji n'otu oge ihe na-enyere aka kpoo ọka ndị ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ezigbo echiche bụ imepụta ihe eji eme ụlọ na shuga, nke anyị na-agbakwunye ihe ọ lemonụ lemonụ lemon, nke bụ astringent. Ngwunye ọzọ a na-ejikarị eme ihe dị ka exfoliator dị nro bụ oatmeal, nke bụkwa ngwaahịa na-agba ume, dị mma maka ndị nwere anụ ma ọ bụ nkụ. Mgbe emechara ya, tinye obere moisturizer ka akpụkpọ ahụ wee dị mma. Moisturizer dị mma ma ọ bụrụ na enweghị mmanụ na ngwakọta ya, n'ihi na ndị a na-akwalite ọdịdị nke abụba na pịmple na akpụkpọ ahụ.
Nchịkọta nri iji kpochapụ akpịrị
Enwere ọtụtụ ihe anyị nwere ike iji meziwanye ọdịdị nke azụ. Na oatmeal na-apụ apụ na moisturizer, na shuga na-enyekwara anyị aka iwepụ mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ na nje. Maka aloe vera, ọ bụ ezigbo ihe maka anụ ahụ nwere uhie uhie na nsogbu ọrịa, ebe ọ na-eme ka anụ ahụ dị nro. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na nje nje, ọ dịghị ihe dị mma karịa mmanụ a honeyụ, ebe ọ nwere ihe ndị na-egbochi nje. Iji kpoo ọka, nweta onwe gị ihe ọ lemonụ lemonụ lemon ma ọ bụ mmanụ osisi tii, dị mma maka ịmecha ọka. Site na ihe ndị a anyị nwere ike ịme nkpuchi iji jiri nwayọ wepụ pimpụ na azụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Etu esi ewepu pịmpụl na azụ
Usoro ọgwụgwọ kachasị mma megide hemorrhoid
Akpụkpọ ụkwụ ọcha dịla azụ: anyị họọrọ ụdị 5 a